Waa dhawaaq qallafsan; waa dhawaaq aad mooddo inuu ku mudayo; waa dhawaaq mataxan; waa dhawaaq aad ka didayso; haddana waa dhawaaq macna weyn xambaarsan.
Beeshu cad quudheed qaadanmayso! Beeshu cadkaa uma qalanto! Beeshu waxay xaq u leedahay waa inay heshaa! Beeshu kalsoonidii way kala noqotay… . Weedhahaas oo dhammi il keliya ayay ka soo wada burqanayaan. Mana aha wax innagu cusub, ee waa waxaynu caadeysanney oo ku arooraya dhaqan gaammurey oo qabaa’ilka reer guuraaga ah lagu yaqaan.
Rabbi haw naxariistee, dadaalkiisana ha ka ajar siyee, caalimkii weynaa ee Muslimka ahaa oo loo yaqiin Ibin Khalduun (dhashy 1332 milaadi), waa ninka bilaabay cilmiga loo yaqaan cilmiga bulshada (sociology), wuxuu sheegay in dhulka ay qabaa’ilku ku badan yihiin ay adagathay sida dawlad looga dhisaa. Aragtida Ibin Khalduun waxay ku salaysantahay in hoggaamiyaha qabiilku uu wax ku hoggaamiyo qancin ee aanu lahayn awood uu wax ku muquuniyo. Qabiilka waxaa isu keena “Alcasabiya” ama tol-la’ayeey iyo habarwacasho, mase gaadhsiin karto taasi xukun muquuno ku dhisan haddaanay helin ruux diin ku kiciya oo ku abaabula.